ရာပြည့်မှာတမ်း………………ကိုပေါက်(မန္တလေး)ရဲ့ပုံနှိပ်စာမူမှတ်တမ်း…………… | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
My Dear Diary » ရာပြည့်မှာတမ်း………………ကိုပေါက်(မန္တလေး)ရဲ့ပုံနှိပ်စာမူမှတ်တမ်း……………	26
Posted by ko pauk mandalay on Jul 10, 2012 in My Dear Diary | 26 comments
ဘယ်နေ့လဲ ဘယ်တော့လဲ ဘယ်အချိန်များမှလဲ
မပေါက်စကောင်း ပေါက်စကောင်း အပိုင်းတစ်
မွေးဇာတိ ကျုံးနဲ့နန်းတော်(ရှေးက မန္တလေး)
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင် တစ်
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင် နှစ်
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင် သုံး
မင်္ဂလာအစ မင်္ဂလာအလည် မင်္ဂလာအဆုံး
ဘ၀အမှားရောက်တော့ ဘ၀မှောက် တစ်
ဘ၀အမှားရောက်တော့ ဘ၀မှောက် နှစ်
ဆိုင်ရှင်ရှိ၏ မရှိ၏ တန်ဘိုးထား၏မထား၏
ပစ်သူတစ်ဆယ် ဖွသူငါး သိမ်းသူတစ်
ko pauk mandalay has written 1106 post in this blog.
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သူကြီးရေ တင်လိုက်တာပုံစံမကျဘူးဖြစ်သွားတယ် ပြင်ပေးပါတော့။
မစ္စတာ တောက်တဲ့ says: တို့ဖေဂျီး ရေးခဲ့တာတွေက
အားကျလိုက်တာ ဖေဂျီးရာ ..
သားသားလည်း ဖေဂျီးခြေရာ နင်းချင်လိုက်တာဂျာ ..
ဒါနဲ့ ဖေဂျီးရေ ..
ဖရဲသီးတစ်ယောက် ဘယ်ပျောက်နေဒုံးဂျ ..
ကြွသွားပြီလား … :D
သားဦးမြေးဦး၊ ၀မ်းတွင်းရူး says: ကိုပေါက်ရေ လေးစားရပါ၏။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8225
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပြင်ပြီးသွားပြီ အခုမှလှသွားတာ
ကိုရင်မောင် says: …..ဂုဏ်ယူပါတယ် ဆရာပေါက်…..
MaMa says: ၀မ်းသာဂုဏ်ယူစရာပါလား ကိုပေါက်။
မိုက်ကယ်ပုလို မတူတဲ့အတွေးနဲ့ ပြောရရင်တော့ ….
မနာလို စရာကြီး :P
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 736
kotun winlatt says: ၀ိုးးးးးးးးးလေးးးးးပေါက်….
နောက်နှစ် ကျနော်တို့ရွာမှာ လုပ်မဲ့ စာပေဟောပြောပွဲကို
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2638
padonmar says: Congratulations!!!!!!!!!ပါ ရာပြည့်ကိုပေါက်၊
ကျမအကြိုက်ဆုံး “နားစည်ကိုထွင်း”လည်း စာရင်းထဲမတွေ့မိသလိုပဲ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1365
TTNU says: ကိုပေါက်ရေ…
စာဖတ်သူ မာမီ အရင်ဆုံးနော်။
သိပ်ရှည်နေလို့ မဖြစ်ဘူး။ သူများမန်းသွားရင် နောက်ကျနေတော့မယ်။
ဇွဲမာန်(အင်းဝ) says: လေးစားပါတယ် အကိုပေါက် အကိုပေါက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ယူပါတယ်နော် နောက်နှောင်လည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် …။
Mလုလင် says: သိကျွမ်းခင်မင် ရတာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ရွှေတိဂုံ မှာ ညရှုခင်း ရိုက်ဖြစ်တာကအစ .. ၀ါသနာ တူ၊ စရိုက် တူ တွေမို့ … တစ်ပုဒ်ကို အင်း &%&%& ဆိုတော့ အပုဒ် 100 ဆိုတော့ စာမူခ တွေ မနည်းမနော … မနာလို တော့ဘူးဗျာ .. ဒါဗြဲ ..။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 326
ကြည်ဆောင်း says: ခရီးသွားစာရေးဆရာ ပေါ့နော်။
mamanoyar says: ဂုဏ်ယူပါတယ် လေးပေါက်ရေ
shwe kyi says: အားပါး အများကြီးပါလား။ လေးပေါက်တော်လိုက်တာ၊ ရေးနိုင်လိုက်တာ၊ မနာလိုလိုက်တာ၊ အားကျလိုက်တာ။
Ma Ei says: ဆောင်းပါးတွေစုစည်းလို့
lynn lynn says: ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုပေါက်။ ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့ မုန့်တွေ ကျွေးအုန်းမလား မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Nyein Nyein says: ဂုဏ်ယူပါတယ် လေးပေါက်ရေ…………. အရမ်းလည်းအားကျတာပဲ။ နောင်လည်း ဒီ့ထက်မက ရေးနိုင်ပါစေနော်…………….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2698
kyeemite says: ကိုပေါက်ရေ..အပေါ်က မအိပြောသလို
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2337
ko khin kha says: ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ထဲမှာ ဂေဇတ်ရွာက ကိုပေါက်ပါသွားပြီဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9955
မောင်ပေ says: နောက်ထပ် ပါမယ့် ၊ ဒီမှာတင်မယ့် ၊ ဇါတ်လမ်းလေးက ပိုကောင်းမယ် ဆိုလားဘဲ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မပဒုမ္မာရေ……….
(ကျမအကြိုက်ဆုံး “နားစည်ကိုထွင်း”လည်း စာရင်းထဲမတွေ့မိသလိုပဲ)က
နားစည်ကိုထွင်းက ကျနော်ကိုလူသိများစေသော နာမယ်ဖတ်ရတာနဲ့မောလိုက်တာလို့အပြောခံရတဲ့
မြန်မာ့ဂီတလောကကို ကျနော်ထိတွေ့ခဲ့သလောက်လေးကို ပြန်ရေးပြထားတာ အပိုင်း23ပိုင်းရှိပါတယ်။
နောက် “မလွမ်းစကောင်း လွမ်းစကောင်း-ရှေးရှေးကမန္တလေး”ဆိုပြီးမန်းလေးမြို့နဲ့ကျနော်ပါတ်သက်ထိစပ်တာလေးကို
“တတမ်းတမ်းတ တတ လွမ်းတသသ မန္တလေး”ဆိုပြီး မန်လေးဂေဇက်မှာဘဲပုံနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော့်ပုံနှိပ်မှတ်တမ်းမှာတော့ ပြည်ပမှာနှိပ်ထားတာကြောင့် အခုစာရင်းထဲမှာ မထည့်တာပါ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အော်မေ့လို့ အခုရာပြည့်ဆိုတာ ပုံနှိပ်ပြီးသားစာမူပါ။
တကယ်ရေးထားတာကတော့ ဆောင်းပါးဝတ္တု ကဗျာ
pooch says: တော်တော်လေးရေးနိုင်တာပါလား လောက်ပေးရယ် ။ အားကျလိုက်တာ။
အနော့်မှာတော့ တလ တပုဒ်တောင် မရေးနိုင်ဘူး။ စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်အောင် ထုတ်စေချင်ပါတယ်။ ထုတ်ဖြစ်ရင်ပထမဆုံးအားပေးမှာပါ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3372
အရီးခင်လတ် says: အများကြီး တွေးနိုင် ရေးနိုင် သူ ကို အလေးပြု သွားပါသည် ခင်ဗျား။
BIG Congratulations !!!!! :-)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1264
Shwe Ei says: စာအုပ်ထွက်အောင်တကယ်ကြိုးစားမှာလား လေးပေါက် အားပေးချင်လို့ပါ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စာအုပ်ထုတ်ဘို့ အဆက်အသွယ်ရှာနေပါတယ်၊
လုင်ရေ 10000ကို တရာနဲ့မမြောက်နဲ့အုံးကွယ်
အရင်စစချင်းက 3000 နောက်လေးထောင်
အဓိက က ပျံ့နှံ့စေချင်တာပါ